समाज Archives - Khula Patra
वाग्मती सफाइ महाअभियान १० औँ वर्ष प्रवेश
काठमाडौं । ‘राष्ट्रका लागि हप्तामा दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको वाग्मती सफाइ महाअभियान आजदेखि नौ वर्ष पूरा गरी १० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विसं २०७० जेठ ५ गते राजधानी काठमाडौँको सभ्यताको स्रोत वाग्मतीलाई स्नान गर्न योग्य बनाउने उद्देश्यका साथ सफाइ महाअभियान सुरु भएको थियो। पह...
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नं १ मा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारबीचका मित्रवत् व्यवहार देखिएको छ । यहाँ २ दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दलका उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । सबै दल र तिनका उम्मेदवारले आ–आफ्नो सिद्धान्त, विचार र संकल्पकासाथ जनतामाझ गएकाले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, ...
समाजसेवाका पर्याय क्षितिजः हरेक मतादाताको मन जित्दै
ताप्लेजुङ। ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडी । कोरोनाको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त थियो । ताप्लेजुङमा पनि अप्रत्यासित रुपमा कोरोना बढिरहेको थियो । नसोचेका मानिसको मृत्यु भएपछि बजार क्षेत्र र गाउँमासमेत चहलपहल शून्य थियो । स्थानीय घरबाट बाहिर निस्कन डराइरहेका थिए । लामो समयको लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गर्ने, ...
जुम्ला । जुम्लास्थित प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा विवाह गर्दा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। बालविवाह रोक्नका लागि मन्दिरमा विवाह गर्नेले स्पष्ट परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी समितिका नायबसुब्बा रत्नप्रसाद आचार्यका अनुसार पछिल्लो समयम...
आजबाट एसईई परीक्षा, ५ लाख १४ हजार ९ सय ७७ परीक्षार्थी सहभागी
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आज शुक्रबार बिहान ८ बजेबाट देशभर एकसाथ सञ्चालन हुँदैछ । पहिलो दिन आज अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुँदैछ । परीक्षा २० वैशाखसम्म सञ्चालन हुनेछ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, एसइईका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार एसईईमा ५ लाख १४ हजार ९ सय ७७ परीक...
दाङ । आफ्नै भूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढेका घोराही–१७ का शालिकराम घर्तीमगर अहिले बंगुरपालनमा जमेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण २ वर्षअघि भारतबाट उनी घर फर्किए। घर फर्किएपछि घर खर्च चलाउन उनलाई धौंधौं पर्‍यो। अनि घोराही–१७ कर्जाहीमा घर्तीमगरले व्यावसायिकरूपमा बंगुुरपालन सुरू गरे...
एमाले पोखरामा सबै आकंक्षीको नाम केन्द्रमा सिफारिस
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका सबै आकांक्षीको नाम केन्द्रमा पठाएको छ । मेयरमा १२ र उपमेयरमा ९ जनाको नाम गत शुक्रबार महानगर कमिटीले जिल्लामा पठाएको थियो । जिल्लाले पनि सोही नामलाई प्रदेशमा पठाएको थियो । बुधबार प्रदेश कमिटीले सबै नाम केन्द्रमा पठाएको सचिव धनन्...
माओवादी छोराको १८ वर्षसम्म न सास न लास, आश मरेपछि किरिया
विराटनगर । विराटनगर ३ का तुलसी आपागाईँ उमेरले ६६ पुगे। उनका लागि पछिल्ला १८ वर्ष सुखद् रहेनन्। २०६० साल असोज १० गतेपछिका दिनहरु उनका लागि भारी बने। मन हलुका कहिल्यै भएन। २२ वर्षीय छोरा कुबेर आपागाईँलाई तत्कालीन शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षले बेपत्ता बनायो। कान्छो छोरा बेपत्ता भएको खबर स...
कोलम्बिया एकेडेमीले गर्‍यो नवप्रवेशी शसस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई सम्मान
काठमाडौं । लोकसेवाको प्रवेश तयारी गराउने संस्था कोलम्बिया एकेडेमीले शसस्त्र प्रहरी निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षकका नव प्रवेशीहरुलाई बधाई ज्ञापन तथा सम्मान गरेको छ। सुरक्षा प्रवेशको नम्बर १ प्रवेश तयारी केन्द्र दाबी गर्दै आएको एकेडेमीले शनिबार अर्याल होटलमा २०७८ सालमा शसस्त्र प्रहरीमा सेवा प्रवे...
काठमाडौं महानगर भन्छ- फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रोमात्रै हाेइन
काठमाडौं । उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन जिम्मा आफ्नो मात्रै नभएको र सबै निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ। गत फागुन र चैतमा मात्रै काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर ३३ दिन सिसडोलसम्म पु¥याउन सकिएको छैन। विभिन्न बहानामा स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन्। यसरी विभ...
वर्ष २०७८ : स्वास्थ्य क्षेत्रमा के-के भयो ?
काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ महामारी केही हदसम्म नियन्त्रण भएसँगै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि थप कार्य थालेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार, स्वास्थ्यका भवन बनाउने, पूर्वाधार थप्ने, उपकरण थप गर्ने लगायत काम यस वर्ष धेरै भए...
म्याग्दी । गत शनिबार परेको असिना पानीका कारण म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–४ दग्नाममा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। असिनापानीले विद्युत् अवरुद्ध हुँदा तीन दिनदेखि गाउँसमेत अन्धकारमय बनेको छ। बाढीले बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटको खानेपानी मुहान र पाइपलाइनमा क्षति पुग्दा तीन दिनदेखि गाउँमा खानेपानी वि...
बागलुङ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२ भीमापोखराका ऋषिराम शर्माले तरकारीकै भरमा घर चलाउँछन्। उनको खेतबारीमा फलेको तरकारी अहिले बागलुङ बजारका घर घरमा पुग्छ। उनले बजारका केही परिवारलाई आफ्नो नियमित ग्राहक बनाएका छन्। सिजन अनुसारका तरकारी र प्लाष्टिक घरमा बेसिजनका तरकारीसमेत उत्पादन गरेर शर्माल...
ओलीले पठाए हलेसीमा चार लाख भेटी !
खोटाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खोटाङको हलेसी मन्दिर र मारातिका गुम्बामा चार लाख रूपैयाँ भेटी चढाएका छन्। चैत १९ मा अध्यक्ष ओलीले भेटी चढाउने घोषणा गरे अनुसार हलेसी मन्दिरमा दुई लाख र मारातिका गुम्बामा दुई लाख रूपैयाँ भेटी चढाएका हुन। अध्यक्ष ओलीले पठाएको भ...
टिपर आतंक : वर्षैपिच्छे सयभन्दा धेरैको ज्यान लिन्छ, तर किन रोकिदैन ?
काठमाडौं । गत चैत १६ गते काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा टिपरले किचेर दुई बालिकाको मृत्यु भयो। बुबासँग मोटरसाइकलमा स्कुल पढ्न हिँडेका ८ वर्षीया सृष्टि तामाङ र ४ वर्षीया श्रेया तामाङले श्वेतवाराही मन्दिरनजिकै अन्तिम स्वास फेरे। टिपरको ठक्करबाट आफ्ना दुई कलिला छोरीको मृत्यु भएको दृश्य हेर्न बाध्य बाबु रो...
प्रत्यारोपण केन्द्रभक्तपुरमा दुई जनाको कलेजो प्रत्यारोण
काठमाडौं । शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा दुई जनाको सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र भारतको दिल्लीस्थित म्याक्स हस्पिटलका डा. शलिन अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले चैत २० र २१ गते दुई जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गरेको हो। आइत...
चेपाङ बस्तीमा पुग्यो बिजुली
हेटौंडा । चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिका–९ पार्सिवाङ रुन्चेवुङमा पहिलोपटक पेल्ट्रिक सेटमार्फत बिजुली बत्ति बालिएको छ। सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको सङ्ख्या धेरै रहेको सो वडामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लाइन हालसम्म जडान हुन नसक्दा उक्त सेटमार्फत बिजुली बत्ती बालि...
सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मात्रै एक तिहाइभन्दा बढी
नवलपरासी । नवलपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मात्रै एक तिहाइभन्दा बढी रहेका छन्। जिल्लामा गत महिना दर्ता भएका १५६ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। अदालतका स्रेस्तेदार महेन्द्रप्रसाद पौड्यालका अनुसार फागुनमा मात्...
पत्रकार एलबी विश्वकर्मालाई मरणोपरान्त सहयात्रा सामाजिक न्याय सम्मान
काठमाडौं । पत्रकार एलबी विश्वकर्मालाई मरणोपरान्त ‘सहयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय सम्मान २०२२’ प्रदान गरिएको छ । अधिकारकर्मी रेशमबहादुर सुनारको स्मृतिमा स्थापित सम्मान विश्वकर्मालाई प्रदान गरिएको हो । ५१ हजार रुपैयाँ राशिसहित विश्वकर्मालाई सम्मान गरिएको हो । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक...
गाडी भाडा बढ्यो [सबै गन्तव्यको सूचीसहित]
काठमाडौं । लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडादर बढेको छ। सरकारले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीको भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढाएको हो। मालवाहक सवारीको पनि भाडा बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडा १० प्रतिशतसम्म बढेको यातायात व्यवस...
सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशतले बढ्ने, ढुवानीतर्फ १५ प्रतिशत बढाउने निर्णय
काठमाडौं । आइतबारदेखि सार्वजनीक यातायातको भाडा १० प्रतिशतले बढ्ने भएको छ। इन्धनको मूल्य निरन्तर उकोलो लागे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनः समायोजन गरिएको हो। बिहीबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले चैत २० गतेदेखि लागू हुनेगरी अन्तरप्रदेशीय सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको हो। सरकारले भा...
दलित समुदाय उत्थान ऐनको नमूना सरकारलाई हस्तान्तरण
बुटवल । दलित समुदायको अधिकार र उत्थानका लागि नागरिक स्तरबाट तयार पारिएको छुट्टै दलित ऐनको प्रस्ताविक नमूना कानुन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा तयार पारिएको दलित उत्थान ऐन नामक विधेयक बिहिबार कानून महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीलाई हस्तान्तरण गरिए...
गृहले गर्‍यो चार जिल्लाका सीडीओको सरुवा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओहरुको सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार बर्दियामा बन्धुप्रसाद बास्तोला, प्यूठानमा सुनिता नेपाल, अर्घाखाँचीमा शशिधर घिमिरे र कपिलवस्तुमा धर्मेन्द्र कुमार मिश्रलाई सीडीओ बनाएर पठाइएको हो । यसअघि बर्दियामा सीडीओ रहेका सन्त...
बालबालिकालाई ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै पिलाउने गरिन्छ। ६ महिनासम्मको बालबालिकाको लागि आमाको दूघ नै पोषणको एक मात्र आधार हुनेगर्छ। तर, ६ महिनापछि बालबालिकाको पोषणलाई लिएर ध्यान दिनुपर्छ। बच्चा ६ महिनाको भइसकेपछि हेल्दी रेसिपीका बारेमा जानकार हुनुपर्छ। कोदोको लिटो कोदोको लिटो बालबालि...
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तिलप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकी छन्। श्रेष्ठ सर्वोच्चको न्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्त भएका हुन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा अनुमोदन भएका श्रेष्ठलाई...
३६ डिएसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ३६ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) को सरुवा भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्रीले सोमबार साँझ डिएसपीहरुको सरुवा गरेका हुन्। सरुवा सूची अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकडभिट्टामा ज्ञानकुमार महतो, इलाका प्रहरी कार्यालय, दमकमा दिलिपकुमार गिरी र इलाका प्रहरी क...
काठमाडौं । कानुनले अपराध माने पनि समाजले अझै छाडिनसकेको गलत प्रथा बालविवाह अन्त्यका लागि धार्मिक अगुवाहरूको भूमिका कस्तो हुन सक्ला? कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थ वा दर्शनले बालविवाहलाई प्रोत्साहन वा मान्यता नदिएकाले धर्मसमेतका आडका नाममा भइरहेको सामाजिक विकृति बालविवाहको क्रम रोकाउन धार्मिक अगुवाहर...
अमेरिकाको वासिङ्टनबाट बालमन्दिरका विद्यार्थीलाई सहयोग
आइतबार, चैत्र १३, २०७८
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका-३ मेदिबुङ जन्मथलो भई हालअमेरिकाको वासिङ्टनमा बस्दै आएका डिल्ली र मन्जना न्यौपानेले फुङलिङको बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयका सुष्त श्रवण तथा बहिरा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई सहयोग गरेका छन् । आफ्ना बुबा आमा स्वर्गीय होमनाथ र खिनमाया न्यौपानेको सम्झनामा २५ हजा...
काठमाडौं । तेह्रथुम सरोकार समाजको अध्यक्षमा मोहनकुमार डाँगी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भएको समाजको आठौं वार्षिक साधारण सभाले डाँगीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । डाँगी दोस्रो कार्यकालको लागि समाजको अध्यक्ष बनेका हुन् । सभाले समाजको वरिष्ठ उपाध...
प्रहरीको नयाँ सिर्जना गरिएका पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा तल्लो तहका प्रहरीको लामो समयसम्म बढुवा हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न नयाँ सिर्जना गरिएका पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रहरी स्थापना भएदेखि नै तल्लो तहमा लामो समयसम्म बढुवा हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न तीन पद सिर्जना गरिएको हो। प्रहरी नियमावली, २०७१ लाई नवौँ सं...
मोरङको लेटाङमा प्रहरी गाउँले झडप, महिला प्रहरीको अवस्था गम्भीर
मोरङ । आफ्नै विद्यार्थीमाथि शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानीयबासी र प्रहरीबीचको झडपले मोरङको लेटाङ तनावग्रस्त बनेको छ। आइतबार दिउँसैदेखि तनावग्रस्त बनेको लेटाङ–५ को खेरूवा क्षेत्रमा अहिले साँझ गाउँले र प्रहरीबीच झडप भएको छ झडपका क्रममा मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्द...
बैंकिङ कसुर मुद्दामा एमालेका वडाध्यक्ष पक्राउ
काठमाडौं । कलैया–१४ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद जयसवाल बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ परेका छन् । ३ वटा छुट्टाछुट्टै बैंकिङ कसुर मुद्दामा ३८ लाख ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको बारा प्रहरीका प्रवक्ता राजेश थापाले जानकारी दिए । जयसवाललाई जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाड...
टिकट बाँड्ने समिति गठन गर्न कांग्रेसको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार बस्दैछ । सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी र संसदीय समिति गठनबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन् । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठक ललितपुरको सानेपास्थित के...
तमोर जलासययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न माग
काठमाडौं । ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाका सांसदहरूले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तमोर जलासययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कुरा उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ्गको भ्रमणका क्रममा लगानी बोर्ड र पावर चाइना कर्पोरेस...
अनाथ बालबालिकालाई शिक्षा दिने स्कुलमा अक्षयकोष बनाउन महापुराणको आयोजना
काठमाडौं । अनाथ, असहाय, टुहुरा र जोखिममा परेका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएको डि.आर. मेमोरियल स्कुलले अक्षयकोष स्थापनाका लागि सप्ताहव्यापी महायज्ञ आयोजना गरेको छ । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–८, सुन्दरबस्तीमा रहेको स्कुलले स्कुलको खर्च व्यवस्थापनका लागि अक्षयकोष जुटाउन श्...
दार्चुला घटनाको आठ महिना : जयसिंहले पाएनन् न्याय, परिवारको बिचल्ली
काठमाडौं । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काट्दा गत साउन १५ गते दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका–२ मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको समितिले एसएसबीको उपस्थितिमा घटना भएको निष्कर्षसहित गृहमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझा...
ताप्लेजुङमा चार दशमलव दुई रेक्टर स्केलको भूकम्प
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ केन्द्र भएर चार दशमलव दुई रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार अपराह्न ४:३९ मिनेटमा भूकम्प गएको हो। गोरखा भूकम्पपछि नेपालमा चार रेक्टर स्केलका ५०० भूकम्प गइसकेको छ। नेपालमा २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पनले ठूलो जनधनको क्षति ग...
जातीय विभेद उन्मूलन राष्ट्रिय सम्मेलन, यस्तो छ १६ बुँदे घोषणा-पत्र
काठमाडौं । जातीय विभेद उन्मूलनका लागि १६ बुदेँ काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै जातीय विभेदविरुद्धको राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । सात वटै प्रदेशका एक सय २० जना भन्दा बढी सहभागितामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा सोमबार र मंगलबार गरेर दुइदिनसम्म काठमाडौंमा चलेको सम्मेलनले १६ ...
‘प्रतिरोधको शतक’ बिशेषांक प्रकाशित
सोमबार, चैत्र ०७, २०७८
काठमाडौं । आरएम मिडिया हाउसले अन्तरराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय बिभेद उन्मूलन दिवस (२१ं मार्च) को अवसरमा बिशेषांक (पत्रिका) प्रकाशन गरेको छ । कम्पनीले सोमबार उक्त पत्रिका बिमोचन पनि गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय दलित आयोगले २१ मार्च सम्बन्धमा गरेको बिशेष कार्यक्रममा उक्त पत्रिका बिमोचन ...
सरोकार समाजको वार्षिक साधारण सभा चैत्र १२ गते हुने
काठमाडौं । तेह्रथुम सरोकार समाजको आठौं वार्षिक साधारण सभा यही चैत्र १२ गते हुने भएको छ । समाजका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले समाजको साधारण सभा चैत्र १२ गते शनिबार दिउँसो ११ बजेबाट काठमाडौंको होटल हार्दिकमा हुने जानकारी दिए । कार्यसमितिको फागुन २ गतेको बैठकले साधारण सभा चैत्र १२ गते सम्पन्न गर्ने...
सिन्धुलीमा कार्यकक्षमै वडाध्यक्षको निधन
सिन्धुली । मरिण गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष कुर्साङ लामाको निधन भएको छ। आज कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्दै गर्दा मस्तिष्काघातका कारण उनको निधन भएको हो। बेहोस भएका लामालाई कपिलाकोट स्वास्थ्य चौकीमा पुर्‍याइएको भए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पानिराज बम्जनले जानकारी दिए। लामाको ...
निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार हुन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता खारेज हुनुपर्ने ...
मेयरसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरीको साविक बराहक्षेत्र गाविस–३ स्थित आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन सचिवद्वय दीपक थापा मगर र जनक थापा तथा रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल निजका सहयोगी अशोकप्रसाद पटेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तत...
पाथीभरा विकास समितिको अध्यक्षमा रक्की थेबे
काठमाडौं । सरकारले पाथीभरा विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई नियुक्त गरेको छ । आइतार साँझ बसेको मन्त्रीपरीषद् बैठकले ताप्लेजुङ सिरिजंघाका थेबेलाई नियुक्त गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले जानकारी दिए । बैठकले मन्त्री आलेको भारत भ्रमणसमेत स्वीकृत गरेको छ । व...
संखुवासभा दुर्घटना : मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रदेश सरकारसँग माग
विराटनगर । एक हप्ताअघि सङ्खुवासभाको मादीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि नेकपा (एमाले) प्रदेश नं १ कमिटीका अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेले माग गरेका छन। न्यौपानेले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसँगको भेटमा प्रतिपरिवार १० लाख र घाइतेको न...
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेपछि संकटमा आरन व्यवसाय
लमजुङ । गाउँघरमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको आरन व्यवसाय विस्तारै लोप हुन थालेको छ । धेरै मिहिनेतमा कम आम्दानी हुन थालेपछि विस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो । पुखौैंदेखि चल्दै आएको यस व्यवसाय वजारमै तयारी भएका साधन आएपछि यसको महत्व पनि त्यत्तिकै कमी भएको आरन व्यवसायिको गुनासो छ । गाउँघरमा चलाउ...
संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ सच्याउन माग
काठमाडौं । नेपालको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरुले हालैको ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ डिजिटल तथा अनलाइन विभागको आयोजना र अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपालको ...
लोकसेवाले माग्यो ३ सय स्टाफ नर्स
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले तीन सय स्टाफ नर्स पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ। आयोगले चैत २ गतेको प्रथम मितिमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनरल नर्सिङ समूह पाँचौ तह स्टाफ नर्सका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो। मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण उम्मेदवारले आय...
आगलागी हुनबाट कसरी जोगाउने ? यस्ता छन् नेपाल प्रहरीका आग्रह
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अहिले सुक्खा मौसममा हावाहुरी चल्ने, घर, पसल, कार्यालय र वनलगायतमा आगलागी भई जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको विगतको तथ्य स्मरण गराउँदै विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक सूचना जारी गरी मुख्यतः चैत, वैशाख र जेठ महिनाका करिब १०० दिन आ...
जहाजको पर्खाइमा बलेवा विमानस्थल
गलकोट । लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आउने आश पलाएको छ । २८ वर्षदेखि नियमित उडान हुन नसकेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रसँगै अब विमानस्थलमा कहिले जहाज उड्ला भन्ने आशामा छन् यहाँका स्थानीयवासी । विसं २०७७ फागुनमै कालोपत्र सक्ने गरी नागरिक उडड्यन प्राधिक...
बिहेको भोजले दुई दिन विद्यालय बन्द, भोज गर्ने ठाउँ दिन वडाध्यक्षको लिखित सिफारिस
जनकपुरधाम । सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, कनकपट्टी, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७, विद्यार्थी संख्या करिब नौ सय। शिक्षक १६ जना। यही फागुन ३० गते सोमबार दिनको करिब दुई बजेतिर चर्को घाममा विद्यार्थीहरू घर फर्किंदै थिए। दुई बजिनसक्दै विद्यालय परिसर सुनसान थियो। सबै कक्षाकोठामा ताल्चा लागिसक...
म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुल्यो, तलब र भत्ता गरी ४४ हजार बढी पाउने (सूचनासहित)
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना आह्वान गरेको छ । मंगलबार साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालयल‍े एक सुचना जारी गर्दै एक लाख संख्यामा म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलाएको हो । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले चैत ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्...
१४७ अतिविपन्नलाई महानगरबाट जनही १० हजार सहयोग : ‘एक महिना टार्ने हो’
काठमाडौं । ‘६ हजार रुपैयाँ कोठाभाडा तिर्छु, चार हजार रुपैयाँको चामल, तेल किनिराख्छु’ यो महिना त जसोतसो टर्ला, अर्काे महिना के गर्ने ?’ ४६ वर्षीय सुमन रायमाझी भने । उनले फागुन ३ गते सानिमा विकास बैंकबाट १० हजार रुपैयाँ निकाले, जुन रकम उनलाई काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा)ले दिएको हो । कोभिड १९ ...
काठमाडौं । पत्रकार केशव भुल ‘युवा पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट पुरस्कृत भएका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रालयका आयोजित एक कार्यक्रमका विच उनलाई पुरस्कार प्रदान गरेको हो । भुल पत्रकारिताको माध्यमबाट युवाको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएवापत पुरस्कारका लागि छनौट भएका थिए । युवा पत्रकारि...
चाँगुनारायण काठमाडौं उपत्यकाको पहिलो बालमैत्री नगर
काठमाडौं, फागुन २९: चाँगुनारायण नगरपालिका उपत्यका भित्रकै पहिलो बालमैत्री नगर बन्न सफल भएको छ। छैठौँ नगरस्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त नगर घोषणा गरेका हुन् । नगरपालिकाले १ वर्षसम्म अभियान सञ्चालन गरेको थियो । कार...
संखुवासभामा बस दुर्घटना, १४ काे मृत्यु
संखुवासभाकाे सातघुम्झातिमा बस दुर्घट ना हुदा १४ जनाको मृत्यु भएको छ। दमकतर्फ जाँदै गरेको बा ४ ख ७३५ नम्बरको बस विहिबार बिहान साढे सात बजे तिर मादी नगरपालिका-६ सातघुम्ती दुर्घटना भएको डिएसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए । ५ जनाकाे जिवितै उद्धार गरिएको छ। बस सडकबाट करिब साढे ३ सय मिटर तल खसेको छ । बस ...
भिजिट भिसामा दुबई हिँडेका १२ जनालाई अध्यागमनबाट फिर्ता
काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले भिजिट भिसामा दुबई हिँडेका १२ जनालाई मंगलबार फिर्ता पठाएको छ। आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न नसकेको र शंकास्पद लागेकालाई रोकेको हो । अध्यागमन स्रोतका अनुसार फकाईएकामा नुवाकोटकी पूजा श्रेष्ठ, काठमाडौंकी आस्था मल्ल, झापाकी कुशुम खड्का, मोरङक...
काठमाडौंको रामकोटमा एकै परिवारका ५ जना वेहोस भेटिए,एककाे मृत्यु
काठमाडौं : काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका स्थित रामकोटमा एकै परिवारका ५ जना वेहोस अवस्थामा भेटिएका छन् । ती मध्ये एक जनाको मृत्यू भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी सुदिप गिरीले जानकारी दिए । चार जनाको गम्भिर अवस्थामा स्वयम्भूस्थित मनमोहन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनास्थलमा बिसका ...
निर्वाचनमा महिला : कोटाबाहेकमा पनि उम्मेदवारी दिनुपर्ने सुझाव
काठमाडौं । पर्पल फाउन्डेसनले ‘महिलावाद र निर्वाचन प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। ११२औं अन्तराष्ट्रिय महिलाको दिवसका सन्दर्भमा सोमबार कमलादीस्थित होटेल रोयल सिंहमा आयोजित अन्तरक्रियामा महिलालाई निर्वाचनामा हुने समस्याबारे छलफल गरिएको थियो। महिला, बालबालिका, अपांगताबा...
भक्तपुरमा बर्डफ्लू भेटियो
भक्तपुर । भक्तपुरमा बर्डफ्लू भेटिएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका–१० मा अवस्थित तीन वटा पोल्ट्री फार्मका कुखुरामा बर्डफ्लू भेटिएको हो। बर्डफ्लू भेटिएका कुखुरा फार्ममा पाइला अग्रिकल्चरल फार्म, शिवराम कवाँको शिखर पोल्ट्री फार्म र हरिकृष्ण कवाँको अजिमा पोल्ट्री फार्म रहेका छन्। ती पोल्ट्री फार्मका क...
चेक बाउन्सका घटना किन बढ्दै छन् ?
काठमाडौं । नुवाकोट लिखु गाउँपालिका– ४ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका एक व्यक्तिलाई उच्च अदालत पाटनले कात्तिक ७ गते बैंकिङ कसुरमा १५ दिनको कैद सजाय सुनाएको थियो । जाहेरवालाको मागदाबीसहित उनलाई ५१ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकिएको थियो । बैंकिङ कसुरका फरार उनी यही ८ फागुनमा पक्राउ परे । उनले बैंक अफ क...
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौं संशोधन गर्दै त्यस्ता प्रशारणको नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै सरकारसँग अनुम...
निजामती कर्मचारी संगठन ताप्लेजुङ अध्यक्षमा थापा
ताप्लेजुङ : नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन ताप्लेजुङको अध्यक्षमा दुर्गा प्रसाद थापा चयन भएका छन् । शनिबार सम्पन्न ११औँ जिल्ला अधिवेशनले थापाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यिय कार्यसमिति गठन गरेको हो । उपाध्यक्षमा रन्जना तामाङ र भानुभक्त श्रेष्ठ, सचिव दिपक भट्टराई, सह–सचिव ललितकुमार नाल्बो र कोषाध्यक्ष रमेश गु...
तमोर नदीको फड्केबाट खसेर युवकको मृत्यु
ताप्लेजुङ: तमोर नदीको फड्के तर्नेक्रममा खसेर एक युवकको ज्यान गएको छ। ताप्लेजुङ फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–२ खेजेनिमका ३७ वर्षीय सुरबहादुर कार्कीको ज्यान गएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार बिहीबार छिमेकीको खेत जोतेर घर फर्कने क्रममा फड्के खसेका थिए । खोजी गर्ने क्रममा शुक्रबार स्थानीयल...
ताप्लेजुङ अस्पतालको प्रशुतीगृहमा भालु पस्याे
ताप्लेजुङ । जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङको प्रशुतीगृहमा भालु पसेको छ । विहीबार राति ११ बजेतिर भालु पसेको अस्पतालले जनाएको छ । बिरामी नभएको समयमा भालु भेटिएपछि प्रहरीको सहयोगमा थुनेर राखिएको अस्पतालका प्रमुख डा. सोनिङ लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्पतालको पछाडिको भागबाट ओहोरदोहोर गर्ने छोटो बाटोबाट...
दोलखाका आठ विद्यालयका छात्रछात्रालाई २१ सय झोला बितरण
काठमाडौं । एसएस फाउण्डेसनले दोलखाका आठ वटा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई झोला सहयोग गरेको छ । फाउण्डेसनले २१ सय थान झोला सहयोग गरेको हो । फाउण्डेसनले बैतेश्वर माध्यमिक विद्यालय, शैलुङ्गेश्वर आधारभूत विद्यालय, मानेडा“डा प्राथमिक विद्यालय, गर्जाङढुङ्गा माध्यमिक विद्यालय, कुटिडांडा मा...
तिलोत्तमा नगरपालिकाले बनायो १६ कोठाको अतिथि गृह
रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले अतिथि गृह निर्माण गरेको छ। वडा नम्बर १९ को केवलानीमा १६ कोठाको अतिथि गृह निर्माण भएको हो। त्यस्तै, १२ सय जना क्षमता रहेको सभाहलसमेत बनेको छ। हाल सभा हलमा कोरोना अस्थायी अस्पताल तथा अतिथि गृहमा अस्पतालमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको आवास व्यवस्थापन गरिएक...
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरातमा परेका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्यदेव भगवान् शिवको पूजा–आराधना गरी आज देशभर मनाइँदैछ। पर ब्रह्मले फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मध्यरातमा शिवरुप धारण गरेकाले मध्यरातमा चतुर्दशी तिथि परेकै दिन पूजा, आराधना, दर्शन गरे यस लोकमा सुख शा...
मुहानको जग्गा किनेर सर्वसाधरणलाई खानेपानी
भक्तपुर । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा पानी वितरणका लागि मुहाननै किनेर सर्वसाधरणलाई खानेपानी वितरण गरिएको छ । वडा नम्बर ८ रहेको सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले मुहान वरपरका जग्गा किनरे पानी वितरण गरेको अध्यक्ष रत्न प्रकाश छुंकाले बताए । हाल ८ सय घरघुरीमा पानी वितरण हुँदै आएको र ४ सयले...
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा के के भयो ?
काठमाडौं । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेवल गरेर संसद्मै छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बैठकमा एमसीसीबारे छलफल भएपनि सबैले आ–आफ्नै अडान दोहो¥याएको बताए । ‘बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त...
सीता परियार : दलित समुदायबाट सिडिओ बन्ने पहिलो महिला
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)मा सीता परियारलाई खटाएको छ । यसअघि भक्तपुर जिल्ला प्रशासनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा रहेकी उनलाई मन्त्रालयले हुम्लाको सिडिओ बनाएर पठाएको हो । परियार दलित समुदायबाट सिडिओ बन्ने पहिलो महिला हुन् । दलित समुदायका पुरुष...
उदयपुरमा जन्ती बोकेको ट्याक्टर पल्टियो: १ को मृत्यु १९ घाइते
उदयपुर । माघ २७: उदयपुरमा जन्ती बोकेको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बिहीबार एक जनाको ज्यान गएको छ । अन्य १९ घाइते भएका छन् । गाईघाट–नेपालटार खण्डको नागबेलिमा भएको दुर्घटनामा त्रियुगा नगरपालिका–१४ का १९ वर्षीय मिलन मग्रातीको ज्यान गएको हो । त्रियुगा नगरपालिका १६ रातापानीबाट जन्ती बोकेर नेपालटारतर्फ जाँदै...
एसइई भौतिक उपस्थितिमै, कुन दिन कुन विषयको परीक्षा ?
भक्तपुर । माघ २७ः यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) वैशाख ९ गते बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले विहीबार तालिका सार्वजनिक गरेको हो । परीक्ष वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुने बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । तालिका अनुसार परीक्षाको पहिलो दिन शुक्रबा...
स्थानीय निर्वाचनमा ‘ईभीएम’ प्रयोगबारे कार्यदल गठन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोगबारे अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह मतदान मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले त्यसको तयारीस्वरुप ईभीएमको प्रयोगबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । आयोगको ...
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिका सबै पदाधिकारीहरु बर्खास्त
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिका सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अध्यक्ष डा. किरण पौडेल, सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकाल, सदस्यहरू कमला वली शिवाकोटी, शसिक...
सिन्धुपाल्चोकमा खुकुरी प्रहार गरी दुईको हत्या
सिन्धुपाल्चोक । यहाँको बलेफी–७ माथिल्लो चिम्लिङमा खुकुरी प्रहारबाट आइतबार राति २ जनाको हत्या भएको छ । स्थानीय विजय तामाङले मादक पदार्थ सेवन गरी ७० वर्षीया वासुमाया तामाङ र ५९ वर्षीय सन्तवीर तामाङको हत्या गरेका हुन् । घटनाका अभियुक्त पक्राउ परिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी राजन अधिकार...
खोपको विवरण पठाउन सबै जिल्ला र स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको मौज्दात र खोप लगाउने व्यक्तिहरुको अभिलेख पठाउन सबै जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। हालसम्म ७१ जिल्ला र ६४४ स्थानीय तहले मात्र खोपको विवरण पठाएकाले बाँकी ६ जिल्ला र १०९ स्थानीय तहलाई यथाशिघ्र पठाउन निर्देशन दिएको हो...
विश्वकर्माको परिवारलाई पत्रकार महासंघको सहयोग
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले स्वर्गीय पत्रकार एलबी विश्वकर्माको परिवारलाई राहतस्वरुप ५० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका बेला बिरामी भएर अस्पताल पुग्दा समेत आर्थिक अभाव र अस्पतालको लापरवाहीले उपचार नपाएर अल्पायुमै निधन भएका २५ वर्षीय पत्रकार विश्वकर्माको परिवारलाई ...
चन्दा उठाएर १८ किमि सडक निर्माण
म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ स्थित घोडेपानी जोड्ने बैकल्पिक सडक निर्माण भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ हिस्तानमा पर्ने महभिरदेखि घराम्दी र टिकोटदेखि ठुलाखर्क, प्यारीभारानी ताल हुँदै सडक सञ्जाल जोडिएको हो। यसबाट घोडेपानी, घराम्दी, टिकोटका बासिन्दाको साथै घोडेपानी घुम्न जाने...
भारतीय गायिका लता मंगेश्करको निधन
काठमाडौं । चर्चित भारतीय गायिका लता मंगेशकरको निधन भएको छ । मुम्बईस्थित ब्रीच क्याण्डी अस्पतालमा कोरोना र निमोनियाको उपचार गराइरहेकी मंगेशकरको आइतबार बिहान निधन भएको हो । मंगेशकर एक महिना यता ब्रीच क्याण्डी अस्पतालमै उपचारथ थिइन् । विगत चार–पाँच दिन यता उनको स्वास्थ्यमा उल्लेख सुधार आएको बताइ...
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट थप ९ जनाको मृत्यु भएको छ । १ हजार ७१४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ८ हजार ५१३ नमुना परीक्षण गरिएको थियो । ५ हजार २२५ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा एक हजार १०३ र तीन हजार २८८ जन...
१२ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण
काठमाडौं ।सरकारले देशभरिका गाउँब्लकमा रहेका नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको अभियान सञ्चालन गरेको छ। यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म देशभर करीब १२ हजार घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। सरकारले चितवन, सप्तरी, महोत्तरीलगायत जिल्लाका गाउँब्लकमा रहेकालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिसकेको छ। ...
कहाँ कति पर्‍यो पानी ? कहिले हट्ला चिसो ?
काठमाडौं । पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर वर्षा भएको छ। यसका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानहरुमा मेघगजर्न/चट्याङसहित देशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाले जारी गरेको प...
८ सय ६० म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्दै श्रम मन्त्रालय
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ सय ६० वटा वैदेशिक रोजगार प्रदायक संस्था (म्यान पावर कम्पनी)को वर्गीकरण गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न इजाजतपत्रवाला संस्था वर्गीकरण गर्नका लागप सहसचिव राजिव पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्राल...
देउवा र मोदीले उद्घाटन गरेर रेल चलाउने तयारी, भाडा ७० रूपैयाँ
काठमाडौं । धनुषाको कुर्थाबाट भारतको जयनगरसम्म रेल सेवा हुने खबरले यतिबेला धनुषाका एक दर्जन गाउँका स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्। रेलमा चढ्ने वर्षाैँदेखिको आफूहरुको सपना अब बल्ल पूरा हुने भएपछि धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, औरही गाउँपालिका र जनकनन्दनी गाउँपालिका सहितको विभिन्न स्थानीय तहका एक दर...
६ हजारले लिए रातो पासपोर्ट
काठमाडौं । सरकारले ११ वर्षमा करिब ६ हजार कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) जारी गरेको छ । राहदानी विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०१० को डिसेम्बर यता ५ हजार ८४८ वटा कूटनीतिक प्रकारका पासपोर्ट जारी भएको हो । यी सबै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भएको विभागका महानिर्देशक डोरप्रसाद अर्यालले जानकारी द...
ललितपुर महानगर र केयूबीच शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समझदारी पत्रमा महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.भोला थापाले हस्ताक्षर गरे । ललितपुर निवासी विद्यार्थीलाई ललितपुरमा रहेका काठमाडौं ...
निर्दयी छोरा : जसले गरे आफ्नै ९० बर्षीय आमाको हत्या
मोरङ । आफ्नै ९० वर्षीया आमा जगमाया श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिका २ बस्ने ४८ वर्षीय कमल श्रेष्ठलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । माघ १२ गतेदेखि घरैबाट एक्कासि हराएको भनिएकी बृद्धाको हत्यापछि शव जलाएको भन्ने सूचना प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कार्यालय पथरीबाट खट...
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेकाे छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वबैंकबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतप...
दलित अधिकार जगेर्नामा सर्वोच्चको मार्गदर्शक फैसला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शक फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले फैसलामा विभेद अन्त्यका लागि मौजुदा नीति र कानूनमा पुनरावलोकन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले छुवाछुतविरुद्धको हक र दलित हक स्थापनाका लागि तीन महिना भित्रै उपयुक्त...
कहाँ हरायो २४ लाख खोप ? सुरु भयो छानविन
काठमाडौं । हराएको भनिएको २४ लाख डोज खोजी गर्न सरकारले छानविन समिति बनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप हराएको विषयमा छानविनका लागि ५ सदस्यीय समिति बनाएको हो। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा गुणराज लोहनीको संयोजत्वमा उक्त छानविन समिति गठन भएको हो। लोहनीले दुई हप्ताभित्र आफूहरुले हराए...
अस्पतालको लापरवाहीका कारण पत्रकार विश्वकर्माको निधन : महासंघ
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले अस्पतालको लापरवाहीकै कारण पत्रकार एलबी विश्वकर्माको निधन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । महासंघले उनको निधनलाई सरकारी स्वामित्वका अस्पतालमै सेवाग्राहीमैत्री सुविधा नहुनुको परिणाम भएको जनाएको छ । महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् अध्ययन समितिका संयोजक रामकृष्ण अधिकारीले श...
७८ वर्षे श्रीहाङमा लिम्बुनीको कष्टकर दैनिकी
-प्रकाश पाक्साँवा, सेतै फुलेका कपाल । चाउरी परेको अनुसार । नसैनसा भरिएका हात खुट्टा । अँध्यारो चुलोमा पकाउँदै गरेको खानेकुरा । घरको परिवार भन्नु नै एक मात्रै । यी हुन तेह्रथुम छथर गाउँपालिका–३ पञ्चकन्या लुकुवाकी ७८ वर्षीया श्रीहाङमा लिम्बुनी । उमेरमा विवाहका लागी धेरैले मन पराए । तर, उनले...
कोभिड अपडेट : १२ हजार ८ जनामा संक्रमण, ८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १२ हजार ८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा ८ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। २५ हजार ९०१ जनामा परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। आज ३ हजार ४० जना संक्रमणमुक्त भएर डिस्चार्ज भएको म...
आयोगले सरकारलाई भन्यो : स्थानीय तह निर्वाचन मिति यथाशिघ्र तोकियोस्
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल तोक्न सरकारलाई भनेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेका हुन्। '२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो च...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१० को तेस्रो लहर (ओमिक्रोन) को संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ । आयोगले सोमबार सरकारी अधिकारीहरुबाट महामारी नियन्त्रणकालागि सरकारबाट भइरहका प्रयास र तयारीबारे जानकारी लिँदै थप संवेकनशी...
काठमाडौं । शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका ६० जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण भएको छ। अस्पतालका ६० भन्दा बढी कर्मचारीमा कोरोना देखिएसँगै अस्पतालले सोमबारदेखि सात दिनसम्मका लागि खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सोमबारदेखि सात दिनका लागि खोप कार्यक्...
भक्तपुर । भक्तपुरमा कोरोना सङ्क्रमितको ‘ग्राफ’ उकालो लागेको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा दैनिक ५०० भन्दा धेरै सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा आइतबार २५८ पुरुष र २७२ महिला गरी ५३० जना नयाँ सङ्क्रमित थपिए। त्यस्तै यही माघ ८ गते शनिबार ९६८, ७ गते ६२७, ६ गते ५६४ सङ्क्रमित...
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) वैशाखमा र कक्षा १२ को परीक्षा जेठमा गर्ने जानकारी दिएको छ । शनिबार बसेको बोर्डको बैठकले एसईई वैशाखमा र १२ को जेठमा गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिलेसम्मको परिस्थितिमा एसईई वैशाखमा ...
भारतमा एकै दिन थपिए ३ लाख ३३ हजार सङ्क्रमित
न्यू दिल्ली । भारतमा पछिल्लो एक दिनमा कोरोना भाइरसका थप तीन लाख ३३ हजार ५३३ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यसैसँगै भारतमा कोरोना शुरु भएयता हालसम्मको कूल सङ्क्रमितको संख्या तीन करोड ९२ लाख ३७ हजार २६४ रहेको जनाइएको छ। भारतमा पछिल्लो केही हप्तादेखि दैनिक सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्यामा दिन प्रति दिन बृद्धि...